साम्राज्ञी–भुवन आरोप प्रत्यारोप -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
साम्राज्ञी–भुवन आरोप प्रत्यारोप
फिल्मी फण्डा । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफुले काम गरेका फिल्मका निर्माताहरुबाट राम्रो व्यवाहार नपाएको दावी गर्दै केही दिन अघि आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी थिईन् । उनले नेपाली फिल्मका निर्माताहरुबाट शोषित हुनुपरेको समेत बताएकी थिईन् ।
छायाँकनका बेला सामान्य सम्मान पनि आफुले नपाएको र छुद्र व्यवहार ठूला ब्यानरहरुले समेत गरेको दावी गरेकी थिईन् । उनको अभिव्यक्ति पछि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा यसवारे चर्चा शुरु भएको छ । उनको अभिव्यक्ति पछि निर्माता तथा सदाबहार अभिनेता भुवन केसीले साम्राज्ञीलाई कटाक्ष गरि प्रतिउत्तरमा आफ्लो धारणा फर्काएका छन् ।
अभिनेता भुवन केसीले शुरुमा अवसरका बेलामा भगवान मान्ने र पछि भगवानलाई राक्षस देख्नेहरु फिल्म क्षेत्रका एजेँरु हुन् भन्दै फिल्मी फण्डासँग गुनासो राखेका छन् । भुवनले आफ्नो धारणालाई सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गरेका छन् ।
”खान नपाएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा रोई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने । सामाजिक सन्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नी !! ” भुवनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
के नायिका साम्राज्ञी शोषण भएकै हुन् ? (भिडियो सहित)